Soomaali / Barnaamijyada Iskuulka ka-hor iyo Ka-dib
Discovery Club waa barnaamij caruurhayn (child care) oo amaan ah oo kobciya caruurta waxbarashada iyo horumarka caruurta oo baxa dugsiga kahor iyo ka diba maalmaha iskuulku jiro iyo maalmaha uusan jirinba. Barnaamijka waxaa heli kara ardayda hada ka diiwaan gashan Xanaanda kahor ilaa fasalka 5-aad. Waxay ardaydu ka heli karaan dugsiga ay dhigtaan ama Discovery Club School. Ardaydu waxay ka qayb qaadanayaan nashaadaad firfircoon oo kale duwan oo siinaya ardayda fursad waxbarasho, xirfado hab-dhaqan iyo jir-dhis ah.
Discovery Club waa barnaamij lacag ah kaas oo hoos yimaada barnaamijka waxbarashada jaaliyada. Qoysasku waa in ay ilmahooda keenaan oo ay ka qaadaan Dugsiyada iyo xarumaha Discovery Club. Barnaamijkan wuxuu leeyahay xanaanada caruurta ee maalin buuxda ama maalin badhkeed iyo waliba jadwal dabacsan (flexible schedules).
Qoysaska xaqa u yeesha waxaa laga yaabaa in ay helaan kaalmo dhaqaale. Akhbaar dheeraad ah, qimaha lacagta iyo codisgaba, booqo spps.org/discoveryclub ama wac 651-632-3793.
* Malmaha iskuulku jiro, ardayda waa loo sii qaadi lagana soo celin iskuulka si ay casharadooda usoo qaataan. Qoysaska ayaa laga rabaa inay ilmahooda geeyaan kana soo qaadaan xarumaha Discovery Club.
Waxbarashada Maalinta ee Wakhtiga loo Dheereeyaya
Ardayda doorta in ay ka qaybqaataan waxbarashada maalinta ee wakhtiga loo dheereeyay ee dugsiga kadib waxay baranayaan waxayaabo badan oo xiiso galiya sida saaxiibo cusub, horumarinta xirfadahooda waxbarasho iyo in ay bartaan in ay noqdaan dad wax abuurle, firfircoon oo caafimaadle. Barnaamijkan wuxuu ardayda ka caawinayaa dhinaca waxbarashada iyo nashaadaadka. Wuxuu baxaa asbuucii laba maalmood (Isniin/Arboco ama Talaado/Khamiis) ama afar maalmood asbuucii (Isniin ilaa Khamiis). Wuxuu socdaa saacad iyo 45 daqiiqo.
Taageerada waxbarasho iyo barnaamijyada ee EDL waxaa ku jiri kara:
Dugsiga Hoose (Fasalada K-5)
Barashada xisaabta iyo akhriska
Fursado waxbarasho oo ficil-ahaana
Qalabka muusikada (Ardayda fasalada 4-5)
Barnaamijka Freedom School Express
Barnaamika Lego League
Ka Caawinta xisaabta iyo akhriska
La Dajinta hadaf ay ku gaaraan guusha waxbarasho
Manhaj ku salaysan baahida ardayga
Fasallo lagu barto luqada Ingiriiska
Helida kiridhit (credit) iyo fasalada khadka interneedka lagu qaato ee ka baxa Dugisga Sare ee Habeenkii (ee ku yaala Gordon Parks iyo East Side Learning Hub @ Harding).
Barnaamijka lacag la’aanta ah waxaa kale oo ku jira:
Cunto fudud iyo midcaadi ahba
Bas guriga keena ardayda degan in ka fog nus-meyl haddii uu waafaqsanyahay nidaamka gadiidka
Caawimaad soo marista wadooyinka waa wayn ardayda guriga u soo lugaynaysa
Waxbarasho ay dhigayaan macalimiint tababar iyo xirfad u leh
Akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka iyo sidaad u diiwaangalin lahayd ilmahaaga, booqo spps.org/extendedday ama wac 651-744-8020.
Waxaa ka mid ah wax yaabaha ugu muhiimsan in uu ardaygu noqodo arday ciyaartoy wanaagsan waa in uu helaa dhibco fiican (good grades) Ciyaaryahanimada Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxaa loogu talagalay in ay waxbarashada kaa caawiso iyo in aad horumar ka gaartid dhinaca waxbarashada iyo dhinaca shakhsi ahaanba. Fursadaha ciyaaraha ee dugsiyadu way kale duwanyihiin, balse arday walba wuxuu ka baranayaa hoogaaminta, ciyaaroonimada, wadashaqaynta, balan qaadka, gaarista hadafka aad rabtay, barashada akhlaaq wanaagsan, tartan iyo ku faanida dugsiga. Dugsiyada sare waxay ardaydu ka heli karaan ilaa 37 ciyaarood oo kale duwan, dugsiyada dhexena waxay ka helayaan ilaa iyo 12 ciyaarood oo kale duwan inta lagu jiro sandad dugsiyeed.
Saddex xilli ayey socdaan ciyaaruhu waxayna kala yihiin, dayr, jiilaal iyo gu’. Ka qeyb-galka ciyaaraha wuxuu ku xiranyahay in ardayda loo oggolaado inay ka qayb gali karaan waxbarasho ahaan iyo caafimaad ahaan. Faah faahin ku saabsan u qalmidda barnaamijyo gaar ah iyo hawalaha iskuulka ilmahaaga, fadlan la xiriir agaasimaha ciyaaraha ee sikuulka ilmahaaga ama booqo spps.org/sports.
Waa barnaamij dugsiga ka dib baxa oo ardayda dugsiyada dhexe ka caawiya waxbarashada iyo nashaadaadka. Iskaashi ka imanaya hay’ado badan oo jaaliyada, ardaydu waxay ka qaybqaadan karaan:
Indho-indhaynta koleejooyinka wax barasho iyo xirfadaha shaqo
Caafimaadka iyo jir-dhiska
Xisaabta, akhriska iyo cilmiga sayniska ee nashaadaadka
Xafladaha gaarka ah
Hogaanminta iyo horumarka
Caawimaada casharada iyo layliyada guryaha
Bandhiga cilmiga muuqaalka
Barnaamijkan waxaa lagu qabtaa 11 iskuul maalmaha Isniinta ilaa Khamiista. Cunta fudud iyo gaadiid ardayda geeya gurigooda markuu dhamaado barnaamijku waa la helayaa haddii uu waafaqsanyahay nidaamka gadiidka iskuullada. Akhbaar dheeraad ah iyo goobaha booqo spps.org/flipside ama wac 651-744-5375.
Waa halka ay ardaydu aaminsanyihin inay ka helayaan xirfad ay kaga dhabayn karaan riyadooda, iyagoo rajaynaya inay wax wanaagsan ku qalinjabiyaan!
Freedom Schools Express waa barmaamij waxbarasho oo iskuulka ka-dib ah oo loogu talo galay in aradada dhigato fasallada K-8 lagu baro sidii ay hogaamiyoyaal u noqon lahaayeen mustaqbalka. Barmaamijka wuxuu diiradda saarayaa waxyaabaha ay soo biiriyeen dadka aan cadaanka ahayn iyo American Indian. Cashiradda oo ay ka mid yihiin maadooyink a sida culuunta ijtimaaciga (Social studies), taariikhda, muusikada, ji,icsiga iyo qaar kale oo badan ayaa wuxuu ardaygu ku baranayaa dhaqammada. Ardaydu waxay kala dooraan karaan adeegyo tiro badan oo ah kuwa wax lagu barto oo ku saabsan dhaqannada kala duwan. Waxaa kale oo ay ardaydu akhrin donaan buugaag tayo leh oo ka shekaynayso dhaqamada.Waxaa kale oo ay ardadu helayaan dad wanaagsan oo kudayasho mudan oo kunool gudaha Magaalooyinka mataanaha ah (Twin Cities). Ardadu waxay wax ka baranayaan qawaaniinta Kwanzaa (oo ah dabaal –deg African American) si ay u sugaan asluubta, u samaystaan hadafyo, looguna dhiirigaliyo in ay bulshada wax ku soo biiriyaan marka ay hoggamiyayaal noqdaan. Waxaa la bixin doonaa cunno fudud iyo gaadiid.
Barnaamijkan Freedom Schools Express waxaa laga heli karaa oo uu ka baxaa American Indian Magnet (K-8), Battle Creek Middle (6-8), Benjamin E. Mays IB World School (K-5), Chelsea Heights Elementary (2-5), Hazel Park Preparatory Academy (K-8), Highwood Hills Elementary (K-5), Linwood Monroe Arts Plus (Upper Campus 5-6) iyo Washington Technology (6-8). Barnaamijku wuxuu baxaa maalmo kala duwan oo ah inta u dhaxeysa Isniinta ilaa Khamiista. Goobaha barnaamijku way is badali karaan. Wixii faah faahin ah, fadlan soo wac 651-744-8020 ama la xiriir email-kan darcel.hill@spps.org.